China 330kV olulodwa iluphu Y-uhlobo transmission umbhoshongo Ukwakha futhi Factory | XY Umbhoshongo
I-XY Group yinkampani enomlando omude. Ekuqaleni konyaka 2000, Ibhizinisi ikakhulukazi lenkampani lalidayisa izinhlobo zezinto zokusebenza kagesi nezocingo ezifana nentambo kagesi nentambo, isiguquli, umugqa wehadiwe, shintsha ikhabethe, umugqa wombhoshongo njll Phakathi konyaka ka-2001 noNyaka ka-2008, sinikeze izinhlobo zemishini yamakhulu amaklayenti ezweni lonke. Esikhathini, iXY Group yaqala ukuwina ukwethenjwa kwamakhasimende ngenxa yemikhiqizo esezingeni eliphakeme nensizakalo yomsebenzi. Okuhlangenwe nakho kwebhizinisi lokuhweba nakho kuletha iXY Group ukuthengwa okunamandla kunabaqhudelana bethu.
Ngonyaka ka-2008, kwasungulwa iXY Tower eyayigxile ekukhiqizeni umbhoshongo wensimbi. I-XY Tower izuze emthonjeni wamakhasimende kabanzi nasekuhlinzekweni okuqinile kweQembu, ukuthuthukiswa kweXY Tower bekushesha eminyakeni yamuva. Kulezi zinsuku, i-XY Tower ihlinzeka ngaphezu kuka-1000 amasethi wensimbi yensimbi minyaka yonke. Amakhasimende ahlanganisa izifundazwe ezingaphezu kwezingu-20 zaseChina nezimakethe zaphesheya kwezilwandle. I-XY Tower ingumhlinzeki ofanelekayo weqembu eliningi le-Global 500 lifaka igridi yombuso, ibhande laseningizimu, China Group engineering engineering, China Telecom, Huawei njll Ngenkathi imikhiqizo yethu isetshenziswa ngempumelelo ezweni elilungu
Langaphambilini I-330kV double loop Y-type line tower
Olandelayo: 132kV single circuit circuit angle tower
Umugqa Wokudlulisa we-220kv
Umugqa Wokudlulisa we-500kv
Imigqa Yamandla Okudlulisa